Tag: paid ad | Martech Zone
Tag: paid ad
IWayin iphehlelela umbane ngokukhawuleza kwiiNdaba eziShukumisayo zeNtlalo
NgoLwesibini, Aprili 3, 2018 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Intengiso yedijithali ifikelele kwinqanaba lokuncipha. I-50% yabantu abadala bayaziphepha iintengiso ezikwiselfowuni kunye nakwidesktop kwaye enye i-47% inyanzelise ukuthintela iintengiso zangaphakathi nohlelo. La manani aqhuba isixhobo sikaWayin, amaBali oLuntu, isixhobo esibalulekileyo kubathengisi bophawu kunye nabathengisi. Namhlanje, ukuba abasebenzisi abakwi-Instagram bacofa okanye baswayipha kwiBali elixhasiweyo, kuhlala kuthatha imizuzwana emihlanu epheleleyo kwiwebhusayithi yophawu ukuyilayisha ngaphakathi kosetyenziso. Abasebenzisi beselfowuni baphelelwa ngumonde, bayadana kwaye
Tuesday, April 3, 2018 Saturday, February 13, 2021